Home Wararka Turkiga Maxay inoo Qabteen 2012-2021 Maxaysa naga Mudan Yihiin?
Turkiga Maxay inoo Qabteen 2012-2021 Maxaysa naga Mudan Yihiin?
Dalka Turkiga waa dal gacan weyn u geystay dalkeenna, waxayna u soo gurmadeen waqti ay Somaliya ku jirtay xaalada aad u adag. Heshiis iskaashi ah oo ka koobnaa wejiyo kala duwan ayaa waxaa ay Somaliya la gashay dalka Turkiga waana sababta ugu weyn ee uu MW hore Xasan Sheekh Maxamud uu Turkiga u aaday isagoo 2 bilood oo kaliya xafiiska joogay 2012kii. Kadib markii barkii ay dowladiisa sameysay wadatashiyo iyo hoos u dhugasho dhibaatada Somalida ka haysata ku tiirsi la’aanta dal weyn oo leh awood uu ku kaalmeeyo isagoon u baahan inuu dal kale fasax ka helo.
Qoryayaasha ku saleysan baahida dalkiisu qabo ee uu MW Xasan Sheekh boorsada ku sii qaatay waxay kala ahaayeen laba qodob oo ilaa maanta ah waxa kaliya ee uu dalka ku socdo:
Taageero dhaqaale oo aan lacag siismo kaliya ahayn in naloo abuuro ilo dhaqaale oo uu dalka mudoo dheer ka macaashi karo iyo .
In naloo fidiyo tababarro ciidan oo ugu dembeynta keeni kara in Somaliya ay hesho ciidan amaankeeda gudaha iyo xuduudaheeda sugi kara.
Dalka Turkiga mahad haka gaartee labadii qodobba waa soo aqbaleen waxaanu MW Xasan Sheekh Xamar ku soo noqday isagoo aad ugu faraxsan miraha ka dhasahy socdaalkiisii Turkiga. Waxaa haddaba ay dowladiisu bilowday in deeqaaha iyo waxyaabaha imanaya si loo habeeyo in miisaaniyad la smeeyayo intii sannadkaas ka dhineyd.
Balaynu dul istaagno waxa qoddobadaan kore ka qabsoomay iyo su’aasha ah maxaa ilaa maanta ka nool .
Dalka Turikiga waxaa uu soo diray khubaro iyo hantiley Somaliya la gashaa heshiisyo lagu kabayo dhaqaalaha iyo sumcadda Somalida si kor loogu soo qaado kalsoonida ay dunida ku qabi karto dalka marka ay arkaan shirkado gaar loo leeyahay oo maalgashanaya Somaliya. Waxaana halkaas ka bilowday labada mashruuc oo ilaa iyo maanta ay dowladda hadda jirtaa ka hesho dhaqaalaha ay ku bixiso mushaaroyinka shaqaalaha iyo ciidanka iyadoon waxba ku kordhin. Meelaha qaar way isku dayday inay ku adkeyso Turkida taas oo ah qof jaraya laantii uu geedka kaga fadhiyey, balsa Turkiga ayaa ogolaaday in aysan ka didin haddiiba loo dulqaadan karo.
Labada il ee dhaqaalaha laga helo, lagana dhaxlay dowladdii Xasan sheekh waa Dekedda Xamar iyo Garoonka Aden Cadde oo ah muraayadda weyn ee laga arki karo inay dowladdaas wax weyn dalka kaga qabatay muddo kooban. Dowladda Turkiga waa awoodday inay Somalida farta ka saarto lacagta ku baxaysay dib u habeynta labada kaabe dhaqaale, hasa yeeshee MW Xasan sheekh ayaa waxaa uu ka codsaday inay Turkida muddo kooban noo maamulaan labada ilba iyadoo lagu saleynayo saami qeybsi aad u yar si dunida loo tuso inaan nahay dal ogol in la maalgashado.
Waxaa kaloo muhiim ah oo aan la illoobi Karin Dalka Turkiga inuu Xamar ka bilaabay duullimaad keeny inay dunida ogaato in Somaliya ay soo noqotay, waana khater weyn oo ay dowladda Turkiga qaadatay. Khatertaas oo ay dowladdii Xasan sheekh aad u yareysay kadib markii ay Shabaab ka saartay dhammaan magaalooyinka waaweyn, laakiin maanta dekadda iyo Garoonkii ayey Canshuur joogto ah ka qaataan.
Ilaa iyo maanta dhaqaalaha ay dowladda NN iksu halleyso waa labada il, waana dhaqaalaha lagu maamulo dowladda iyo ciidamada waana ay tahay in loo tiiriyo abaalkeeda MW Xasan sheekh. Iyo dowladiisii, laakiin madaxda dalka xukuntaa ma taqaanno abaal iwm. Intaan kaliya kuma ekeyn wax ka qabashada baahida dhaqaale ee dalka waxaa uu MW Xasan sheekh ka codsaday dalka Turkiga kab miisaaniyadeed oo si toos uga muuqada miisaaniyadda dalka waxaana ay Turkiga billaabeen inay bil walba na siiyaan $2 Milyan oo dollar oo ilaa maanta sideedii u socota.
Taageerada Dhismaha Ciidanka.
Qodobkii ku saabsanaa Dhismaha ciidamada ee uu MW Xasan sheekh ka codsaday dalka Turkiga waxay isla markiiba bilaabeen Tababaridda CXDS Somaliyeed, waxayna Xamar ka fureen xerada Turki-Som oo ah Meesha ugu weyn ee lagu tababaro ciidankeena. Hawshaas waa tan ilaa maanta aad ku aragtaan baraha bulshada ciidamo tababar dhameystay iyo hub waaweyn oo lagu wareejinayo dowladda Farmajo. Waayo Turkida MW Xasan markii uu heshiisyadaan la galayey ulama gelin inay isaga iyo dowladiisa siiyaan taageerada Milateri iyo tan dhaqaale ee waxaa uu ula galay inay qaranka Somaliyeed siiyaan iyadoon loo eegeyn cidda hogaamineysa xelligaas.
Waxaana iyana Mudan dalka Turkiga inay Xamar ka fureen laba Cisbitaal oo waaweyn oo lagu daweeyo dadka Somaliyeed ee dan yarta ah, iyadoo laga qaado qiimo aad u jaban, waxaana dhinaca kale loo fududeeyey dad badan oo Somaliyeed inay ganacsi weyn la sameystaan ganacsatada Turkiga waxaana hadda Xamar laga furay Cisbitaal Casri ah oo wadnaha lagu qalo, RedSea Hospital waayo qofka wadnaha xanuunaa ma sugi karo inta laga geynayo Turkiga, mana iska bixin karo qiimaha lagu qalo wadnaha oo ku dhow ilaa $30,000 marka Turkiga la geeyo. Maantasa Xamar uu ka yahay $5,000 -$10,000, taasina waxaa saldhig u ah heshiisyadii ay wada saxeexeen MW Erdugan iyo Xasan sheekh. Waxaana Somaliya ay Turkiga ka furteen Safaaraddooda dunida ugu weyn oo MW Erdugan iyo Xasan Sheekh Xariga ka wada jareen. Waddada Maka Al mukarrama iyo wadooyin kale oo ay sameyeen Turkiga ayaa ka dhsahy heshiisyadaas waana waxyaabaha hadda lagu dheefsado ee weli socdaa. Ma jiraan wax heshiisyo la taaban karo oo ay dowladda NN la gashay Turkiga.
Haddaba waxaa halkaan ka muuqata qiimaha ay dadka iyo dalka Turkiga nagu leeyihiin iyo abaalka ay tahay inaan u hayno mar waliba anoogoon ka abaal dhaceyn madaxdii Somaliyeed ee sida waddanimada leh ugfa soo shaqeysay oo uu ugu horreeyo MW Xasan Sheekh iyo dhamaan dowladiisii.